म यो जस्तै महसुस छ, यो कुरा को शुरुवात साँच्चै राम्रो छ । केहि बहुमूल्य छ । म छु तलाकशुदा, तर अब म पूरा गर्न चाहनुहुन्छ छ जो कसैले एक हास्य को अर्थमा, जो कसैले बनाउन सक्छ तपाईं राम्रो महसुस हरेक दिन । कुनै पनि पाहुना जसले भन्छ मेरो कार्ल. तिनीहरूले ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ गर्न, मलाई त कि म राम्रो महसुस.
यो कुनै पनि दिन्छ मलाई मेरो पति । बाँच्न यहाँ धेरै लामो छ, तर संग नयाँ काम एक ठूलो कम्पनी मा, वास्तवमा, म अब घर जान र खेल्न गृहिणी वा बन्न एक महिला बेरा. म हुन चाहनुहुन्छ एक दण्ड लागि सबै समय म यहाँ खर्च र अब छ, र अब आशा छ कि तपाईं देखाउन हुनेछ भनेर मलाई तपाईं पनि एक दण्ड । तपाईं एक मान्छे छौं, र तपाईं आदर कसैले एक तलाकशुदा महिला मलाई जस्तै पूरा गर्न चाहन्छ. जब तपाईं आराम घर मा, के तपाईं सधैं कहीं जाने? मेरो लागि, यो मेरो बगैचा, सिद्ध भने म बाहिर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ यो मान्छे र एक्लै हुन मलाई । म चाहनुहुन्छ बनाउन नयाँ मित्र यहाँ, र म तपाईं आशा गर्न सकिन्छ, एक असल मित्र मलाई? कि म छु छैन एक विशिष्ट स्विडिश महिला छ जो गोरा कपाल र नीलो आँखा । म खाना र सैंडविच बनाउन धेरै राम्रो छ । सराहना मलाई । म परवाह छैन जहाँ तपाईं छन्, तर म स्वीकार गर्न छ र भन्न कि म केहि लागि स्विडिश मानिसहरू । मलाई लाग्छ कि यो स्विडिश मानिसहरू यति सुन्दर छन् र राम्रो छ, र कि के हो म बुझ्न, र दाँत । अनुभव संग काम यो, तर म जस्तै हेर्न हामी कसरी प्राप्त गर्न प्रत्येक अन्य थाह र त्यसपछि बाहिर जान, सँगै एक राम्रो दिन छ । बसोबास र निर्माण जीवन सँगै । तपाईं सहमत कि म छोराछोरीलाई देखि एक पछिल्लो सम्बन्ध छ । म हुँ एक रोमान्टिक गर्ने सजिलो छ. यो गर्न मा हाँस्नुहुन्थ्यो. कुनै सुझाव, धन्यवाद । गम्भीर बनाउन चाहन्छ संग एक नियुक्ति मलाई!. म संग हुन सक्दैन छ जो कसैले सधैं धमिलो, तलमाथि र क्रोधित । आफ्नो हृदय प्रकारको छ र ख्याल राख्नुहुन्छ अन्य मान्छे । तपाईं इमानदार र निष्कपट. कुनै कुरा तपाईं कहाँ छौं देखि, म चाहनुहुन्छ, तपाईं पूरा गर्न मलाई । तपाईं पनि एक हुँ किनभने म देख लागि यो साइट मा छ जो एक व्यक्ति गम्भीर चाहन्छ, जसले मलाई भेट्न मिति गर्न, मलाई र आषा प्रेम पर्नु. अर्को एक भने हामी जीवित पक्ष द्वारा पक्ष, तर आवश्यक छैन. तपाईं संग इमानदार हुनुपर्छ, आफैलाई आफैलाई प्रेम, र त्यसपछि यो एक सफलता हुनेछ । म म छु तलाकशुदा, र म गर्न चाहन्छु जो कसैलाई भेट्न खर्च गर्न सक्छन् साँझमा मलाई । कसैले जसलाई संग तपाईं गर्न सक्छन् एक राम्रो कुरा, छ कि तपाईं? एक स्नातक हुनुपर्छ, केहि को लागि देख गम्भीर छ । म साँच्चै पूरा गर्न आवश्यक जो कसैले साझेदारी गर्न सक्छन् मेरो जीवन मा मलाई संग. त्यसैले तपाईं गर्न सक्छन् देखि, तपाईं को हुनुहुन्छ मलाई आमन्त्रण गर्न एक राम्रो खाने त हामी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ केहि अचम्मको छ । वफादार, इमानदार, निष्कपट, रोमान्टिक, स्मार्ट, परिश्रमी, सुरक्षित, मजा, वफादार, वफादार र विश्वसनीय. एक मान्छे संग एक हास्यास्पद भावना । समय को लागि खेल. मित्र र आनन्द प्रत्येक अन्य । एक्लो बस मलाई जस्तै, गलत केही त्यहाँ मार अरूलाई छु, बस मित्र जे भए पनि ।. म पक्का छु, त्यहाँ छन् मान्छे को एक धेरै आवश्यकता हो, जो मित्र, बस म जस्तै.
एक गम्भीर चाहने व्यक्ति संग बाहिर झुन्डियो मलाई । जो कसैले पनि देख लागि सही मान्छे र हुन चाहन्छ अनन्य. तपाईं कुनै सोच्न आवश्यक छ के तपाईं लागि हड्डी खनिज घनत्व । लागि भित्र मेरो प्यान्ट सीधा छैन. जो कसैले पनि प्रेम खोजिरहेको र एकाकीपनको । तपाईं हुनुपर्छ विश्वस्त र शर्म छैन.
म छु बाटो अगाडी तपाईं को
तपाईं हुनुपर्छ खुला सम्पर्क आफ्नो प्रेमिका । तपाईं हुनेछ सुशील र आकर्षक छ, भद्र र धेरै अभिलाषी र अर्थपूर्ण. तपाईं को लागि देख रहे प्रेम म हुँ बस जस्तै, र तपाईं हुनुपर्छ अद्वितीय रूपमा तपाईं रूपमा स्पष्ट छन् । शर्म हुनेछ नगर्नुहोस्, म तपाईं आनन्द आशा ! म त एक्लो, र म तपाईहरु मलाई दिन दुवै घनिष्ठता र धेरै मजा कुराहरू को रूप मा भविष्यको छापे! कुनै कुरा तपाईं छन् जो वा के तपाईं हुन् जस्तो लाग्छ. म खुसी हुन सक्छ भने म तपाईं चिन्न र शायद तपाईं संग प्रेम पर्नु मलाई । तपाईं छौं बस मलाई जस्तै, र तपाईं लाग्छ प्रेम सेवा गर्नुपर्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ, म तपाईं संग यहाँ एक झूटा प्रेम । कुनै, ? शायद तपाईं गर्न चाहन्छु पैक र केहि पाउन हास्यास्पद कुरा?»तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं यात्रालाई र यात्रा! देख्न पाउन र रोचक कुराहरू छन् भनेर एकदम शान्त र परिचित छ । मेरो साथीको घर छ, एक्लै र म पर्याप्त थियो छु! ! तपाईं पाउनुहुनेछ मजा कुराहरू मलाई भविष्यमा. म छु एक मित्र छैन जो हास्यास्पद मा सबै, त्यसैले म तपाईं को विचार र हामी कसरी पाउन सक्छ एक मजा कुराहरू धेरै सँगै. तपाईं पनि बाहिर जाने र एक राम्रो खाने!, खुसी र सकारात्मक छ । स्वीकार गर्न मलाई कि म आफैलाई हेरचाह? तपाईं हुनुपर्छ एक मानिस छ जसले हेर्न रुचि मलाई मा धोखा मेरो प्रेमी! उहाँले थाहा छैन कि म मारा अर्को, र अब, एक हात मा, म चाहन्छु पूरा गर्न एक मानिस यहाँ । के तपाईं हुन चाहनुहुन्छ कि व्यक्ति? म कुनै समस्या छ यात्रा! तपाईं हुनुपर्छ जो व्यक्ति दिनेछु मलाई धेरै अधिक रोमांचक!, तर यो छैन मेरो स्वाद! म आशा तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो एक्लोपन र धेरै राम्रो संग कुरा मलाई
← कार्यक्रम लागि एन्ड्रोइड - निःशुल्क डाउनलोड. - सबै भन्दा लोकप्रिय भिडियो कल
सबै मुक्त - खेल, सफ्टवेयर, संगीत, भिडियो, फोटो, निःशुल्क →